I-Comfy Basement Apartment -King Bed/Kitchen/Laundry - I-Airbnb
I-Comfy Basement Apartment -King Bed/Kitchen/Laundry
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Greg And Esther
U-Greg And Esther Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elingaphansi elithokomele elinendawo yokungena yangasese endaweni ethule. Ifulethi elilodwa lokulala elinombhede olingana nenkosi (umatilasi wakwaNovafoam). Igumbi lokuhlala line-queen pullout sofa. Ikhishi eligcwele elinakho konke okudingayo ukuze udle kulo uma ukhetha. Amamayela ayi-6 ukuya eDowntown Chattanooga noma eCamp Jordan Complex. 2 amamayela ukusuka ku-I-24. Ababungazi bahlala esitezi esiphezulu futhi bayatholakala nganoma yiluphi usizo ongase uludinge. I-Apartment ine-carport yayo ukuze ukwazi ukupaka imoto yakho ngaphansi kwekhava. Iwasha nesomisi efulethini.
Zenzele ekhaya efulethini lethu elingaphansi langasese elinezinsiza ezithokomele. I-Apartment ine-driveway yayo kanye ne-carport. Umgwaqo ozimele onendawo yokupaka izimoto eziningi ngaphandle komgwaqo uma kudingeka, indawo yokungena yangasese, ikamelo lokulala elilodwa elinombhede olingana inkosi (umatilasi omusha weNovafoam), igumbi lokuphumula nekhishi elinesitofu nohhavini ongusayizi ogcwele, itafula lokudlela, isofa lokudonsa elilingana nendlovukazi, ithelevishini ene-AppleTV, i-wi-fi, nendlu yakho yokugezela yangasese enobhavu wokugeza omusha sha, indlu yangasese entsha sha, nezinto zangasese. Konke lokhu uthola endaweni ethulile endaweni elungele ukuya e-Chattanooga, imizuzu emihlanu ukusuka ku-I-24 nemizuzu eyishumi ukusuka ku-I-75.
Sihlala ngaphezu kwefulethi, ngakho-ke umsindo wezikhathi ezithile ungahle ube khona nakuba silwela ukuthula ekuseni kakhulu nasebusuku kakhulu ngenxa yezivakashi zethu. Sicela usazise nganoma isiphi isikhathi uma umsindo uyahlupha. Siyaxhumana futhi siyakwazisa ukuxhumana kwakho futhi!
Ulwazi oluwusizo oluvela ezihambelini zangaphambili:
Ukudonsa imoto ngaphansi kwe-carport phezulu kwe-driveway kungase kuqine uma unemoto yosayizi ogcwele. Abanye bakhetha ukupaka ku-driveway kunokuba bangene endaweni ye-carport. Indawo yokupaka iyatholakala nasemgwaqeni.
Izivakashi eziningana zishiye amanothi omphakathi nangasese ukuthi umbhede ukhululekile kakhulu!
I-HDTV ene- I-Amazon Prime Video, Apple TV, I-Chromecast, Disney+, Hulu, I-Netflix, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
4.88 · 321 okushiwo abanye
Indawo yokuhlala ethule imizuzu ukusuka edolobheni, i-Lookout Mtn, kanye nenkundla yezemidlalo yasendaweni. Kunemisebenzi eminingi yangaphandle efana nokuhamba ngebhayisikili ezintabeni, ukugibela, nokuqwala izintaba endaweni, konke okuqhelelene nasekhaya.
Ibungazwe ngu-Greg And Esther
Ababungazi bangabanikazi futhi bahlala phezulu. Siyatholakala ngomakhalekhukhwini nganoma yiluphi usizo noma ulwazi mayelana nendawo. Zizwe ukhululekile ukubuza imibuzo, sizobandakanyeka kuphela ngendlela ofuna sihlanganyele ngayo. Uma kukhona okudingayo ukuze wenze ukuhlala kwakho kukhululeke kakhudlwana, sazise futhi sizozama ukukwamukela. Futhi, uma udinga ukuboleka okuthile ongakupheka ngakho, asinandaba nokuzwa okuvela kuwe. Umgomo wethu uwukuvakasha okuphumuzayo kwakho.
Ababungazi bangabanikazi futhi bahlala phezulu. Siyatholakala ngomakhalekhukhwini nganoma yiluphi usizo noma ulwazi mayelana nendawo. Zizwe ukhululekile ukubuza imibuzo, sizobandak…
UGreg And Esther Ungumbungazi ovelele